Manchester United ayaa ka caga jiideysa inay bixiso £ 68m si ay u hesho Jules Kounde
Home Horyaalka Ingiriiska Manchester United ayaa ka caga jiideysa inay bixiso £ 68m si ay...
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseyneyso saxiixa daafaca dhexe ee Sevilla Jules Kounde laakiin waxay ka caga jiidayaan inay bixiyaan £ 68m si ay u helaan ciyaaryahanka reer France.
Red Devils ayaa la rumeysan yahay inay u aqoonsatay 22 jirkaan inuu yahay bartilmaameedkooda daafaca ka hor suuqa xagaagan, iyadoo kooxda la sheegay inay isha ku heyso inay la saxiixato xidig ka dhinac ciyara Harry Maguire .
Sida laga soo xigtay Daily Mail , kooxda 20ka jeer hanatay horyaalka Ingariiska ayaa si dhow isha ugu heysa Kounde, kaasoo sidoo kale lala xiriirinayo Real Madrid iyo Paris Saint-Germain .
Si kastaba ha noqotee, kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka caga jiideysa inay dhaqaajiso qiimaha daafaca ee lagu iibinayo 68m sababtoo ah saameynta dhaqaale ee cudurka coronavirus.
Kounde, oo qandaraas kula jira Estadio Ramon ilaa xagaaga 2024, ayaa dhaliyay seddex gool 33 kulan oo uu saftay heerka kooxeed intii lagu jiray ololihii 2020-21.
United ayaa sidoo kale la sheegay in weli ‘aad u xiiso’ saxiixa xidiga Borussia Dortmund ee Yaadoon Sancho
Previous articleManchester United oo u bandhigtay Fiorentina lasoo wareegitaanka Nikola Milenkovic
Next articleLucas Digne ayaa heshiis cusub oo waqti dheer ah u saxiixay kooxda Everton